Ku qasbida Codsiyada ka joojinta macOS Sierra | Waxaan ka socdaa mac
Ku qasbida Codsiyada ka joojinta macOS Sierra
In kasta oo xaqiiqda ay tahay in nidaamka kumbuyuutarka tufaaxu uu aad iyo aad u deggan yahay, had iyo jeer waxaa jiri kara xaalado sababa in uu soo laallaado ama mid ka mid ah barnaamijyada aan wadno uu shaqada joojiyo.
Tan waxaan ku dooneynaa inaan ku caddeyno in inta badan, haddii nidaamka Mac ma sudhan tahay sababta oo ah nidaamka laftiisu shaqada wuu joojiyay, laakiin sababta oo ah dalab saddexaad ayaa ah midka cillad ka soo gaadhay sidaa darteedna arjiga socda waa midka burbura oo aan noo oggolaanaynin inaan wax ku qabanno kumbuyuutarka illaa aan ka baxayno.
Markay waxyaabahani dhacaan waxa ay tahay inaan samayno waa inaan ku qasabno bixitaanka arjigaas oo si aan caadi ahayn u shaqeynaya iyo tan Apple lafteedu waxay diyaarisay meel aan ku maareyn karno xiritaanka habkaas, taas oo ah, QASAB.
Si tan loo sameeyo, kaliya tag  menu-ka oo guji halka loo yaqaan 'drop-down' ee ka muuqda bixitaanka Force ... waxaad arki doontaa in daaqad pop-up ah ay furan tahay oo ku tusaysa codsiyada shaqeeya iyo Kuwee ayaa joojiyay jawaab celinta si aad u xulato waxaad u aragto inay ku habboon yihiin una xiraan.
Hagaag, qodobkaan waxa aan rabno inaan kuu sheegno ayaa ah in injineerada software-ka Apple-ka ay had iyo jeer sii socdaan ficilkanna waxaa jira wado kale oo qarsoon oo aan ku keydinayno daaqada pop-up ee aan ku raadinayno dalabka joojiyay inuu noqdo awoodo inuu sameeyo. inuu xiro
Haddii ka hor intaadan riixin  menu, taabo furaha 'SHIFT', waxaan ku arki doonnaa ' menu-ka halkii aad ka muujin laheyd xoog bixida ..., waxa u muuqda waa ka bixitaanka xoog ee arjiga hore. Haddii waxa aad furtay ay yihiin Erey oo ay shaqadii joojisay, markaad qabanaysid wixii aan soo tilmaamay, waxaad ku arki doontid hoos-u-dhaca waa Force Word inuu baxo.
Ma ahan wax ka badan qaab ka duwan oo lagu qasbo ka bixitaanka codsiyada, laakiin xaaladdan iyada oo la tixgelinayo in kan aad ku qasbeyso inaad xirto uu yahay dalabka horudhaca isticmaalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » macOS Sierra » Ku qasbida Codsiyada ka joojinta macOS Sierra
Jony Ive wuxuu rabaa inuu naqshadeeyo mashiinka saabuunta lagu shubo
Ku ilaali shaashadda cusub ee difaaca 'MacBook Pro' 2017-ka